ग्रामीण जीवनमा सुगमता र मोहकता थप्दै यी चिल्ला सडकहरु - Pahal Sanchar
दाङ, । सधै धुलाम्मे र हिलाम्मे हुने घोराही लुहासुरको सडक पीच भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव उदय जिएम दंग छन् । चिल्लो र फराकिलो सडक, उस्तै फराकिलो पेटी र नाला भएको सडक भएर आवातजावत गर्दा उनलाई निकै रोमान्चित अनुभव हुन्छ । चिल्ला र फराकिलो सडकले जीवनलाई सहज र सुगम त बनाएको छ नै साथसाथै वातावरणलाई पनि उत्तिकै मोहक बनाएको सचिव जिएमको अनुभूति छ ।
“सडक साँच्चिकै रहरलाग्दो बनेको छ । उत्तिकै व्यवस्थित पनि छ । सडकको सुन्दरताले वातावरणमा मोहकता थपेको छ । ” सचिव जिएमले बताए ।
घोराही १६ नव जीवनज्योति टोलका रोमबहादुर भण्डारी विगत ४ वर्षदेखि घोराही-बयरबटुवा-खिरिटिया सडकमा अटो चलाउँदै आएका छन् । यो सडकमा अटो दौडाउँदा यी चार वर्षमा उनले उनले खुब सास्ती झेलेका छन् । कहिले हिलो, कहिले धूलो त्यसमाथि खोपिल्टै खोपिल्टाले भरिएको यो सडकमा अटो कुदाउनु उनलाई कुनै युद्ध भन्दा कम लाग्दैन ।
तर अब यो सडक पनि धमाधम पिच हुँदैछ । यही रफ्तारमा काम भए हप्ता दिन अघि नै पिच भइसक्ने देखिन्छ । अब भने अटो चालक भण्डारी निकै खुशी भएका छन् । भन्छन् “अब अटो चलाउन मजा आउनेवाला छ। यात्रुहरुलाई पनि यात्रा रमाइलो हुने भो ।”
घोराही ७ सौंडियारका यातायात व्यवसायी माधव न्यौपाने सररा- सौंडियार सडक पिच भएपछि निकै खुशी छन् । भन्छन् ” सडक पिच भएपछि निकै सुविधा भएको छ । सडक पनि निकै राम्रो बनेको छ ।”
सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र अहिले थुप्रै सडकहरु फराकिलो र पिच बनाउने कार्य भइरहेको छ । यी सडक निर्माणको ठेक्का रमण के एस जेभी/आशिषले पाएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङका प्रमुख सचिन्द्र कुमार देवका अनुसार प्याकेज नं. १ अन्तर्गत नारायणपुर पुरानो गाविस भवनदेखि नारेबाङ, सररा- सौंडियार, नारायणपुर प्रहरी चौकीदेखि दक्षिणतर्फ हुँदै थारुगाउँ सडक (१४ किलोमिटर), प्याकेज नं. २ अन्तर्गत बाँसगजेरीदेखि आँखा अस्पतालसम्म सडक तथा ढल निर्माण (१४ किलोमिटर) र प्याकेज नं. ३ अन्तर्गत विपी मार्ग-बालिमखोला-सिमलतारा, प्रहरी बोर्डिङ-खिरिटिया, सैनिक ब्यारेकदेखि भरतपुर, झिंगौरा आश्रम गोर्खा अस्पताल हुँदै भेटनरी, ल्याण्ड्फिल साइट, बाहुनडाँडा चोक हुँदै लेटार, रतनपुरचोक हुँदै अटोभिलेज- तेरौटे स्कुल हुँदै बाँसकोटसम्म करीब ३७.२ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । यी सबै सडकहरु १२ मिटर चौडाइ र १.२० मिटर फुटपाथ र व्यवस्थित नालासहित पिच हुँदैछन् ।
१ अर्ब ५ करोडमा ३ वर्षभित्र निर्माण कार्य सकाउने गरी ठेक्का पाएको रमण केएस जेभीले प्याकेज नं. १ अन्तर्गत सररा- सौडियार सडक तोकिएको समयभन्दा ८ महिनाअघि सकाएको छ । अन्य सडकहरुको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको रमण के एस जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर सहदेव गौतमले बताउनु भयो । ” यी सडकहरु २०७८ असारसम्म सकाउनु पर्ने हो । तर हामीले त्यो भन्दा अघि नै सकाउँदै छौं । प्याकेज नं. १ को हामीले तोकिएको भन्दा ८ महिना पहिले सकाऔं । अरु सडकहरु पनि छिटै सकाउँदैछौं ।” प्रोजेक्ट म्यानेजर गौतमले थप्नु भयो ।
रमण के एस जेभीले सडक निर्माण कार्य समय अघि त सकाउँदै छ नै निर्माण कार्य पनि उत्तिकै गुणस्तरीय र उपभोक्तामैत्री बनाएको जनाएको छ । प्रोजेक्ट म्यानेजर गौतम भन्नुहुन्छ ” निर्माणमा हामीले कुनै संझौता गरेका छैनौ । सडकहरु गुणस्तरीय बनेका छन् । बीचबीचमा सबै पक्षबाट बरोबर अनुगमन भइरहेको छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङका प्रमुख सचिन्द्र कुमार देव रमण केएस जेभीले गुणस्तरीय कार्य गरेको बताउनुहुन्छ । “निर्माण शुरु भएदेखि नै हाम्रो प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । काम गुणस्तरीय भएको छ । कहि कतैबाट गुनासो आएको छैन । रमण देशभरी राम्रो छवि बनाएको कम्पनी हो । यसले धेरै काम समय अघि सकाएको रेकर्ड छ । यहाँ पनि समय अघि सकाउँदैछ । हामी रमणलाई बोनस दिन्छौं ।” आयोजना प्रमुख देवले थप्नु भयो ।
गुणस्तरीय संगसंगै उपभोक्तामैत्री भएर सडक निर्माण कार्य अघि बढाएको प्रोजेक्ट म्यानेजर गौतम बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार कम्पनी हामीले निर्माणमा उपभोक्ताहरुको आवश्यकता र मागलाई विशेष ध्यान दिएको छ । कैयौं ठाउँमा कम्पनीले तोकिएको डिजाइन भन्दा थप संरचना निर्माणा गरेको छ ।
निर्माण भएका र हुँदै गरेका यी चिल्ला र फराकिला सडकहरुले गाउँ र शहरको यात्रालाई सुगम, सहज र रोमाञ्चक बनाएको छ । वर्षौंदेखि हिलो, धूलो र खाल्डाखुल्डीले अनेक सास्ती झेलिरहेका उपभोक्ताहरुले अहिले निकै आनन्द महशुस गरिरहेका छन् । यी चिल्ला सडकहरुले ग्रामीण जीवनमा सुगमतासंगै मोहकता पनि थपेको छ र गाउँ र शरको दूरी र भेदलाई पनि धेरैहदसम्म कम गरेको छ ।